Momba anay - LangO Mould Co., Ltd.
Maty ny fitomboan'ny fiara
Ny teknolojia Langou dia indostrialy feno miompana amin'ny famolavolana sy fanamboarana fitaovana enti-miasa isan-karazany, fitaovana fiara toy izany, fitaovana fanaovana sary enti-miasa fitaovana enti-miaro hafanana ary fikirakirana fitaovana enti-miasa.
Langou dia mahay amin'ny famahana ireo faritra mandeha amin'ny fiara miteraka olana, indrindra amin'ny fitaovam-pandrosoana mandroso, fampitaovana famindrana ary ny haitao fanaovana sary lalina. Azontsika atao ihany koa ny manome vahaolana ara-teknika ho an'ny fitifirana olana noho ny fipetrahan'ny mpanjifa. Ny fitaovana fiarovana ny hafanana dia nanangona traikefa manan-danja amin'ny famokarana fitaovana amin'ny fitaovana samihafa amin'ny sosona iray sy sosona telo Ny ekipan'ny langou Tool dia nifindra noho ny 20 taona niasana matihanina fahaiza-manao amin'ny fitaovana enti-mandeha amin'ny hardware sy ny vokatra nohomboan'ny fitaovana ary manome serivisy mahomby ny mpanjifa. Mandritra izany fotoana izany dia manana ekipa mpamolavola za-draharaha ny ekipa izay miasa miaraka aminao, ekipa mpitantana tetik'asa matihanina, dingana fanodinana sy famokarana tanteraka, vondrona sy fiaraha-miasa fitaovana debugging sy nohitsakitsahana ny rafitra fitantanana famokarana ary rafitra fitantanana fifehezana kalitao henjana. Hatreto aloha, langou dia nanangana fiaraha-miasa tsara any Amerika Avaratra, Amerika Atsimo, Eoropa ary firenena hafa, ary hanohy hampivelatra ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa any Amerika Avaratra, Amerika atsimo. , Eoropa sy firenena hafa, ary mbola hivoatra hatrany izahay.
Miorina amin'ny fotokevitra "mamorona sanda misy kalitao, manompo ny mpanjifa amin'ny fahamendrehana", ny ekipan'ny langou Tool, dia manana fitantanana manara-penitra, vokatra avo lenta, vidiny mirary ary serivisy avo lenta avo lenta aorian'ny fivarotana hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa. Raisinay an-tsitrapo ny taratasy ao an-trano sy ny antso avy amin'ny mpanjifa vahiny, ary tonga hitarika ny orinasa izahay.
Maty ny fitomboka vy
Izahay dia manao faritra marefo amin'ny fitaovan'ny fitaovana ho an'ny mpanjifa any Polonina. Mividy fitaovana izahay, fizotran'ny famolavolana lasantsy CNC, fizotran'ny fitsaboana hafanana, fizotran'ny fikikisana, fizotran'ny fanapahana tariby, CNC fini ...